သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့ မွေးနေ့လေးကို မမေ့မ လျော့ဘဲ သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတော င်း ပေးခဲ့တဲ့ မေ – XB Media & News
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ ကွယ်လွန်သွားတာတော့ (၅)လကျော်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတစ် ခုကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ သို့ပေမဲ့ ရေမွန်ရဲ့ မိသားစုတွေရော ရေမွန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ မနေ့တနေ့ကလိုပဲစိတ်ထဲထင်ကျန်နေ ခဲ့ပြီး အခုချိန်ရှိ ရေမွန်တစ်ယောက် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အလား မယုံမကြည်နိုင်ဖြစ်နေကြပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့နေ့ရက် လေးပဲဖြ စ်ပါတယ်။ ရေမွန်သာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာ အသက် (၃၃)နှစ်ပြည့်မြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေမွန်ရဲ့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့လေးကိုတော့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ မေ ကသတိတရနဲ့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက် နှာကနေ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးနေခဲ့ပါသေးတယ်။
“Happy birthday သူငယ်ချင်းရေ.. Raymond .. မတွေ့တာကြာနေလို့ နင်ရှိနေသေးတယ်ပဲ အမြဲတွေးမိပါတယ်. ဖြစ်လေရာ ဘဝမှာ အ ကောင်းဆုံးရှိနေမယ် ယုံကြည်တယ်.. သတိရတယ်ကွယ်… till we meet again” ဆို ခုချိန်ထိသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရေမွန်ကို ရှိနေ သေး တ ယ်လို့ တွေးမိနေပြီး အခွင့်အရေးရှိရင် တစ်ချိန်မှာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေအဖြစ် နောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဆုံတွေ့ခြင်းသေး ကြောင်း ကိုပါ ရေမွန်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးနဲ့အတူ တောင်းဆုပြုထားခဲ့ပါသေးတယ် CeleZone ပရိသတ်ကြီးရေ။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ေရမြန္ကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားတာေတာ့ (၅)လေက်ာ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ ခုကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေပမဲ့ ေရမြန္ရဲ႕ မိသားစုေတြေရာ ေရမြန္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ မေန႔တေန႔ကလိုပဲစိတ္ထဲထင္က်န္ေန ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္ရွိ ေရမြန္တစ္ေယာက္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးတဲ့အလား မယုံမၾကည္ႏို င္ျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။
ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေရမြန္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာ က္တဲ့ေန႔ရက္ ေလးပဲျဖ စ္ပါတယ္။ ေရမြန္သာသက္ရွိထင္ရွားရွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာ အသက္ (၃၃)ႏွစ္ျ ပည့္ေျမာက္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရမြန္ရဲ႕ ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔ေလးကိုေတာ့ သူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀ ကီးျဖစ္တဲ့ ေမ ကသတိတရနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ ႏွာကေန ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးေနခဲ့ပါေသးတယ္။
“Happy birthday သူငယ္ခ်င္းေရ.. Raymond .. မေတြ႕တာၾကာေနလို႔ နင္ရွိေနေသးတယ္ပဲ အၿမဲေတြးမိပါတယ္. ျဖစ္ေ လရာ ဘဝမွာ အ ေကာင္းဆုံးရွိေနမယ္ ယုံၾကည္တယ္.. သတိရတယ္ကြယ္… till we meet again” ဆို ခုခ်ိန္ထိသူငယ္ခ် င္းျဖစ္သူ ေရမြန္ကို ရွိေန ေသး တ ယ္လို႔ ေတြးမိေနၿပီး အခြင့္အေရးရွိရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြအျဖစ္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ထပ္မံဆုံေတြ႕ျခင္းေသး ေၾကာင္း ကိုပါ ေရမြန္အတြက္ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေလးနဲ႔အတူ ေတာင္း ဆုျပဳထားခဲ့ပါေသးတယ္ CeleZone ပရိသတ္ႀကီးေရ။
ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ သမီးလေး စံထိပ်ထားဦး အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်